‘युद्ध स्मारक पार्क’ निर्माण अलपत्र- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
‘युद्ध स्मारक पार्क’ निर्माण अलपत्र
कीर्तिपुर नगरपालिकाले मूर्तिको कार्यशालासहित पार्क बनाउन १ करोड ६७ लाख २० हजार ३ सय रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ तर दुई दर्जनभन्दा बढी मूर्ति संरक्षणविहीन अवस्थामा छन् ।
मंसिर २०, २०७८ सीमा तामाङ, सुशीला तामा‌ङ
काठमाडौँ — बजेट अभावले कीर्तिपुर नगरपालिका–१, २ र १० को करिब ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको ‘युद्ध स्मारक पार्क’ को काम रोकिएको छ । घेरा, पर्खाल, सत्तल, मनोरञ्जनस्थल, हरियाली उद्यानसमेतको योजना बनाएर दुई वर्षअघि सुरु गरिएको पार्क निर्माण बजेट अभावका कारण रोक्नुपरेको पार्क उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकुमार महर्जनले बताए । उनका अनुसार हरियाली उद्यानका लागि केही संरचना बनिरहेको भए पनि मुख्य काम रोकिएको हो ।
‘पार्कको काम रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘वन कार्यालयसँग अनुमति लिएर पार्कस्थलमा भएका ठूला–ठूला रूख काटेर नयाँ बिरुवा रोपेपछि मात्र पार्कमा मूर्ति स्थापना गरिने छ ।’ नगरपालिकाले पार्कमा राख्ने मूर्ति बनाउन मूर्ति कार्यशाला नै सञ्चालन गरेको थियो । महर्जनका अनुसार बाघ भैरव उत्पत्तिको कथासमेत समावेश गरी ‘कीर्तिपुर स्मारक पार्क’ बनाउने नगरपालिकाको योजना छ ।
मूर्तिको कार्यशालासहित पार्क निर्माणमा १ करोड ६७ लाख २० हजार ३ सय रुपैयाँ खर्चिएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा प्रवक्ता सरस्वती खड्काले बताइन् । ‘मूर्ति स्थापना गर्न बाँकी नै छ, संरक्षण पनि गरेका नै छौं,’ उनले भनिन्, ‘महानगरले दिएको बजेटको मात्र काम भएको हो, पार्कको काम अझै बाँकी नै छ ।’ पार्कको डीपीआर अनुसार धेरै खर्च लाग्ने भएकाले बजेट हेरेर मात्र चरणबद्ध काम गरेको उनले सुनाइन् । काठमाडौं महानगरले ‘नगर–नगर साझेदारी’ कार्यक्रमअन्तर्गत पार्क बनाउन बजेट सहयोग गरेको थियो । महानगरले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ र ०७७/०७८ गरी दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो ।
मूर्ति बनाउन नेपाल ललितकला प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा २५ जना कलाकार खटिएका थिए । प्रतिष्ठानका कलाकारहरूले झन्डै दुई/तीन वर्षअघि नै दुई दर्जनभन्दा ढुंगाका मूर्तिहरू सिर्जना कार्य सक्काएर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेका प्रतिष्ठानका मूर्तिकला विभाग प्रमुख लालकाजी लामाले बताए । पार्कका लागि ‘मूर्ति कार्यशाला कीर्ति २०७५’ नाम दिएर मूर्ति निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । लामाका अनुसार परम्परागत तथा आधुनिकता र समकालीन समाज झल्कने मूर्ति सिर्जना गरिएको हो । मूर्ति प्रतिस्थापना स्थान र व्यवस्थापनका लागि केही समयअघि नगरपालिकाले लामासँग समन्वयको कुरा अगाडि बढाएको थियो । तर, पार्क समयमै सम्पन्न नहुँदा ती मूर्तिहरू सरंक्षणबिनै अलपत्र छाडिएका छन् ।
स्थानीय मात्र नभएर मूर्ति सिर्जनामा सहभागी मूर्तिकारलाई पनि निर्माणाधीन पार्कमा सिर्जना असरल्ल परेको देख्दा चिन्ता लागेको छ । मूर्तिकार दीपक लामा भन्छन्, ‘मूर्तिहरू पार्कमा प्रतिस्थापन भयो कि भनेर म तीन पटक जति पार्कस्थलतिर पुगिसकेँ । त्यता भएका मूर्तिहरूको अवस्था देख्दा साह्रै दुःख लागेको छ । नगरपालिकाले कलालाई संरक्षणचाहिँ गरेको भए हुने थियो ।’ केही काम भएको पार्कमा पनि सिर्जना भएका कलाकृतिहरूभन्दा भौतिक संरचनालाई बढी जोड दिइएको उनको गुनासो छ ।
मूर्तिकार लामाको भनाइलाई समर्थन गर्दै मूर्तिकला विभाग प्रमुख लामा पनि नगरपालिकाले पार्कमा मूर्ति प्रतिस्थापना गर्ने टुंगो नलागेसम्म कलाकृतिलाई निश्चित ठाउँमा संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार मूर्ति निर्माणमा उत्तम शाक्य, चन्द्रश्याम डंगोललगायतका मूर्तिकारहरूले परम्परागत बेसमा उत्कृष्ट कलाकृति सिर्जना गरेका छन् । ती मूर्ति संरक्षण तथा प्रतिस्थापनाका लागि छिट्टै नै नगरपालिकासँग कुरा राख्ने लामाले बताए ।
नगरपालिकाले पहिले फोहोर फाल्ने भिरालो ठाउँमा नै पार्कको विस्तार गर्ने योजनाअनुसार काम अगाडि बढाएको थियो । योजनाअनुरूप पार्कमा अहिले पर्खाल लगाई हरियाली बनाउन दुबो लगाइएको छ । समितिका अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, ‘सडकसँगै जोडिएको भिरालो जग्गामा पर्खाल लगाउने र घाँसको मात्र काम पूरा भएको छ । अब हामी मूर्ति प्रतिस्थापनाका लागि पनि काम सुरु गर्ने योजनामा छौं ।’
नगरपालिकाले पार्कका लागि बनाएका केही मूर्तिहरू मात्र स्थापना गरिएका छन् । बाँकी अहिले घाँसैघाँसले ढाकिएका छन् । व्यवस्थापन गर्न सकिने मूर्ति सकेसम्म संरक्षण गरिएको महर्जनको दाबी छ । झुल्किने सत्तल तथा पर्खाल र मूर्तिको सौन्दर्यले कीर्तिपुरको मुहार फेरिने कुराले नगरवासीमा उत्साह थियो । अहिले पार्कका लागि सिर्जना गरिएका मूर्ति संरक्षणविहीन हुँदा स्थानीयहरू चिन्तित छन् । ‘दुबो लगाउनु अगावै मूर्ति स्थापना भइसक्नुपर्ने थियो । तर, काम नै रोकिएकाले अब मूर्ति स्थापना नै नहोला भन्ने चिन्ता लागेको छ,’ एक स्थानीयले भने ।
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ १०:१०
मंसिर २०, २०७८ नवीन पोखरेल
लन्डन — इंग्ल्यान्डको काउन्टी काउन्सिलमा पहिलो पटक नेपाली मूलका उम्मेदवार छनोट भएका छन् । हाल नर्थ योर्कसायरकै कोलबर्न टाउन काउन्सिलर डा. जगन्नाथ शर्मा नर्थ योर्कसायर काउन्टी काउन्सिलमा काउन्सिलर उम्मेदवार छनोट भएका हुन् ।
शर्मा आउँदो मे २०२२ मा हुने निर्वाचनका लागि कन्जरभेटिभ पार्टीबाट उम्मेदवार छनोट भएका हुन् । उनले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा ९५ प्रतिशत मत पाएका थिए । नर्थ योर्कसायर इंग्ल्यान्डको ठूलो काउन्टी मानिन्छ । शर्मा काउन्टी काउन्सिलरमा उठ्ने नेपालीमू लबाट पहिलो हुन् । अन्य नेपाली काउन्टीभन्दा तल्लो तह बरो काउन्सिलसम्म मात्र पुगेका छन् ।
उम्मेदवार छनोट अघि डा. शर्माले सार्वजनिक यातायात सेवामा सुधार, काउन्सिल ट्याक्स घटाउने, नयां जागिर र व्यवसाय सृजना, स्वास्थ्य सेवा सुधार, भूतपूर्व गोर्खाको समान पेन्सन मुद्दामा सहयोग, बेलायत र नेपाल सरकार तथा जनता जनताबीच सुमधुर सम्वन्ध विस्तार, सुरक्षित सडक, कन्जरभेटिभ पार्टीको नीति तथा विचार प्रवर्धन एवं बहुसांस्कृतिक काउन्टी बनाउने प्रतिवद्धता तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि ९५ प्रतिशत कन्जरभेटिभ सदस्यहरुले मत दिएका थिए ।
रोयल आर्मी मेडिकल कोर्पस्मा रिजर्भड आर्मी अफिसर समेत रहेका शर्मा सन् २०१२ देखि काउन्सिलर छन् । उनी कोर्लबर्न टाउनको डेपुटी मेयर र मेयर भइसकेका छन् । बेलायती अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकको निर्वाचन क्षेत्र रिचमण्डसायरमा उनी कन्जरभेटिभ पार्टीको उपाध्यक्ष हुन् । शर्माले आफूलाई अर्थमन्त्री सुनाकले उम्मेदवार छनोट भएकामा बधाई तथा शुभकामना दिँदै चुनावका लागि प्रचारप्रचारमा सहभागी भएर सहयोग गर्ने वचन पनि दिएको बताए ।
पर्वत बिहादी रानीपानीका शर्मा बेलायती रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत क्याट्रिक ग्यारिसनको डिपार्टमेन्ट प्रमुख सुपरिटेन्डेन्ट पनि हुन् । सन् २००१ मा बेलायत आएका शर्मा सन् २००३ देखि बेलायती रक्षा मन्त्रालयको जागिरमा प्रवेश गरेका थिए  ।
स्पोर्टस् मेडिसिनमा विद्यावारिधि गरेका डा. शर्मा जनस्वास्थ्य तथा संक्रामक रोग विशेषज्ञ पनि हुन् । उनका स्वास्थ्यसम्बन्धी कैयौं जर्नल प्रकाशित छन् । रक्षा मन्त्रालय प्रवेश गर्नुअघि सन् २००१ देखि २००३ सम्म उनी नेशनल हेल्थ सर्भिस् (एनएचएस) मा पनि जागिरे थिए ।
शर्मा बेलायतभित्र तथा बाहिरी मुलुकमा आपतकालीन स्वास्थ्य सम्बन्धि सहायता तथा तालिम प्रदान गर्ने इमर्जेन्सी हयूमेनिटेरियन मेडिकल टिममा पनि सदस्य छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०९:३७
काठमाडौंको शंखरापुरमा कोठाभित्र दम्पती मृत फेला